Nandravarava An’i Philippines ny Rivo-doza Bopha
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tseky Tsonga Xhosa Zoloa
MANILLE, Philippines—Olona 1 000 mahery no maty ary 970 000 mahery no tsy maintsy nafindra toerana, taorian’ny fandalovan’ny rivo-doza mahery nandravarava an’i Philippines, tamin’ny talata 4 Desambra 2012. Iray volana taorian’izay, dia mbola mitohy ny fanampiana ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah ho an’ireo tra-boina tamin’ny Rivo-doza Bopha (antsoin’ny olona hoe Pablo).
Nohamafisin’ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Manille, tamin’ny 7 Janoary lasa teo, hoe dimy no Vavolombelona maty vokatr’ilay rivo-doza, ary iray no nampidirina hopitaly satria voa mafy ny taolan-damosiny. Fianakaviana Vavolombelona 520 eo ho eo koa no nafindra toerana, trano 140 no rava, ary trano 400 no simba.
Nitsidika an’ireo faritra niharan-doza ny solontenan’ny biraon’ny sampana mba hijery hoe toy inona ny zavatra simba. Nitady fomba hanampiana an’ireo tra-boina koa izy ireo sady nampionona sy nampahery an’ireo tsy maty fo aman’aina. Nanangana komitin’ny vonjy rano vaky ireo Vavolombelona, ary nametraka toby fito sy nanampy an’ireo nanolo-tena hizara ny fanampiana.
Potika tanteraka ny sakafo sy ny fiveloman’ny olona tany amin’ny faritra hafa any Philippines, anisan’izany ny tanimbary sy toerana fambolena akondro ary voaniho. Nandefa kamiao maromaro nitondra sakafo 13 taonina teo ho eo àry ilay komitin’ny vonjy rano vaky. Tsy tonga tany amin’ny toerana iray niharan-doza anefa ny fanampiana satria nisy tetezana iray tapaka.
Trano fivavahana 15, antsoina hoe Efitrano Fanjakana, koa no simba ary 2 no rava. Napetraka vonjimaika tany amin’ireo Efitrano Fanjakana tsy simba kosa ny tra-boina sasany. Efa mitady toerana mety kokoa hametrahana azy ireo ny komitin’ny vonjy rano vaky.
Vola fanomezana avy amin’ny Vavolombelon’i Jehovah eo an-toerana sy maneran-tany daholo no isahanana ny fandaniana amin’ireny vonjy rano vaky ireny. Ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah no mandamina an’izany ka ny vola fanomezana ho an’ny asa maneran-tany ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah no ampiasainy.
Hoy i Dean Jacek, mpitondra tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah any Philippines: “Malahelo daholo izahay noho ny nahalasanan’ny namanay sy mpiara-mivavaka aminay, sy ny zavatra simba vokatr’iny rivo-doza iny. Mbola hanao an’izay vitanay amin’ny ezaka vonjy rano vaky anefa izahay, anisan’izany ny fampiononana sy fampaherezana ny olona.”